Wareysi: Madaxweynaha Puntland saamaynta abaaraha - BBC Somali
Wareysi: Madaxweynaha Puntland saamaynta abaaraha
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa BBC uga waramay safarka uu ku marayo deegaanadda abaaruhu saameeyeen ee ka tirsan gobolka Bari.
Gaas ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay deegaanadda uu tagay oo ay ka mid yihiin dad xoolihii ka dhamaadeen oo dhibaato xoogan wajahday isla markaana maamulkiisu aanu awood u lahayn wax u qabashada iyo taageerada dadka abaaruhu taabatay, waxaa uu sheegay in aanay jirin wax gurmad wayn oo ka soo gaaray dhanka Dawlada dhexe ee Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka.
Dhinaca kale wuxuu ka hadley arrimaha amaanka gaar ahaan dagaalka maamulkiisu kula jiro maleeshiyaad taabsacsan kooxda la baxday dowladda Islaamka. Cabdiwali Maxamed Cali ayaa isagoo ku sugan degmada Bandar Bayla ee gobolka Bari wuxuu u waramay wariyaha BBC Mowliid Xaaji Cabdi.
Maqal Doorashada ku celisk ah ee Kenya oo saameyn ku yeelatay ganacsiga
Doorashada ku celisk ah ee Kenya oo saameyn ku yeelatay ganacsiga
Maqal Booqashada Farmaajo ee Uganda maxay salka ku heysaa?
Maqal Garaad ku gacan saydhay heshiiskii Somaliland iyo maamulka Khaatumo
Garaad ku gacan saydhay heshiiskii Somaliland iyo maamulka Khaatumo
Maqal Taageerayaasha xisbiga kulmiye oo maanta isugu soo baxay fagaaraha beerta xorriyada ee Hargeysa